Fariinta Ra’iisul Wasaaraha ee Munaasabadda Ciidul Fidriga – Xafiiska Ra'iisul Wasaaraha Soomaaliya
Waxaa la qoray May 1, 2022
Fariinta Ra’iisul Wasaaraha ee Munaasabadda Ciidul Fidriga
Waxaan Shacabka Soomaaliyeed iyo guud ahaanUmmadda Islaamka ugu hambalyeynayaamunaasabadda Ciidda Barakeysan ee Ciidul Fidriga.
Waxaa mahad oo dhami u sugnaatay Allaha weyn oo si nabad iyo caafimaad leh noogu dhammeeeyaybishii Barakeysneyd ee Ramadadan. Allaha nagaaqbalo soonkii iyo acmaashi wanaagsanayd ee aan la nimid.
Ciiddu waa munaasabad farxadeed, sidaas darteedwaxaan ka codsanayaa shacabka Soomaaliyeed, gaarahaan dadka Eebbe wax siiyay in la caawiyo dadkadanyarta ah, lagana farxiyo iyaga iyo qoysaskooda siay u dareemaan farxadda Ciidda.
Munaasabadda Ciiddul Fidrigu sanadkan waxa ay kusoo aadday iyadoo uu xaalku aad uga duwan yahaysidii uu ahaa sanadkii hore xilligan oo kale, markaasoo ay dalka ka jirtay xaalad amni yo siyaasadeed ooaad u kacsan taas oo la xiriirtay doorashada dalka iyoheshiis la’aanta siyaasadeed ee dalka ka taagneyd.
Alla mahaddii sanadkan waxa aan farxadda Ciidda u dabbaal dageynaa, iyadoo howlihii doorashadu soogaareen heer gebogebo ah, ka dib dadaal iyo shaqobadan aan galinnay sidii dalka doorasho uga dhicilahayd.
Runtii caqabadihii naloo dhigay iyo isku dayadii laguxagal daacinayay doorashada dalku waxa ay ahaayeen kuwo aad u waaweyn. Hase yeesheewaxaan uga soo gudubnay dhabar adayg iyo daacadnimo, waayo waxaa naga go’nayd in ay dalkadoorasho ka dhacdo.
Waxaa Alle mahaddii ah in go’aankeygii ahaa in aanan dano shakhsi ah ama siyaasadeed ka dhexraadin raadin doorashada ay wax badan noosahashay.
Sidiiba dhici jirtay waxaan suurto gal ii ahayd in aanmadaxweynenimo isu sharraxo ama doorashadana u maamulo si u adeegeysa damaceyga, laakiin waxaan goostay in aan dib u dhigto hankeyga siyaasiga ah, siaan dalkan u badbaadinno doorasha
Taas macneheedu ma ahan in aanan lahayn hansiyaasi ah, balse waxaan gartay in aan u tanaasulodanta qaranka.
Ugu dambeyn anigoo u hambalyeynaya guddoonkala doortay ee Labada Aqal ee BJFS, waxaan kuboorrinayaa in ay dedejiyaan doorashadamadaxweynaha dalka.
Waxaa sidoo kale ku boorrinayaa xildhibaannadaSoomaaliyeed ee sharafta leh in ay dalkan u dooraanhoggaan ka badbaadin ka saari kara xaaladda adage e amni, siyaasadeed, dhaqaale ee dalku ku jiro iyo in ay ka shaqeeyaan dejinta iyo meel marinta shuruuciyo xeerar sahlaya in ay 4 sano ka dib dalka ka dhacdo doorasho qof iyo cod ah, lagana hortago in uu mar kale dalku khatar iyo hubanti la’aan la mid ah tii Alle naga soo badbaadiyay.
Mar kale Ciid Mubaarak وكل عام وأنتم بخير
Qormadii HoreHore Ra’iisul Wasaaraha oo kulammo la qaatay Guddoomiyaha Golaha Shacabka iyo Guddoomiyihii KMG-ahaa
Qormada XigtaKu Xiga R/Wasaare Rooble oo suxufiyiinta Soomaaliyeed ugu hambalyeeyay munaasabadda 3-da May oo ah Maalinta Xorriyadda Saxaafadda Adduunka.